Death Knight Blood - Torolàlana PvP - Patch 8.1.0 | Death Knight, Torolàlana ho an'ny lalao, PvP | WoW Guides | WoW Guides
Death Knight Blood - PvP Guide - Patch 8.1.0
Adriel Diaz | | Fantsom-pahafatesana, Game Guide, pvp
Hey tsara! Manao ahoana ianao, mpiara-miasa? Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao talenta tsara indrindra ho an'ny Knight PvP Death Knight izahay mba hamoahana ny mety ananan'ity fananganana manokana ity.
1 Ra Knight Knight
2 Fanovana natao ho an'ny ady ho an'i Azeroth
3 Fiovana eo amin'ny patch 8.1.0
5 niveau 56
6 niveau 57
7 niveau 58
8 niveau 60
9 niveau 75
10 niveau 90
11 niveau 100
12 Torohevitra mahasoa
13 Talenta PvP
14 Addons ilaina
Ra Knight Knight
Ny Death Knights dia tompon-daka mahery amin'ny aretina pesta fantatra amin'ny fampiasan'izy ireo ny maizina amin'ny fanaparitahana aretina amin'ireo fahavalony, famelezana ny kapoka mafy ary fananganana ireo lavo ho mpanompo mahatoky.
Manisy fahasimbana betsaka amin'ny fihaonana kendrena tokana sy kendrena marobe.
Mifanaraka amin'ny toe-javatra rehetra izany.
Ny fanasitranana azy manokana dia avo loatra.
Kely ny fivezivezeny.
Fanovana natao ho an'ny ady ho an'i Azeroth
Azonao atao ny mahita ny fampahalalana rehetra momba ny fanovana natao tao amin'ny Battle for Azeroth momba an'i Legion avy amin'ity rohy manaraka ity:
Fiovana eo amin'ny patch 8.1.0
Veteranin'ny ady fahatelo (Tsy mampitombo fiadiana).
Rivo-doza taolana (Manasitrana nerfed ny mpampianatra.)
Sitraky ny nekropolis (Nofidiana io).
fahaverezana (Tsy nesorina intsony taorian'ny nahafatesany).
- Talenta PvP
Aura aretim-po (Nesorina ny talenta momba an'ity spec ity.)
Simulasi maizina (Nahena ny cooldown ary nesorina ny vidin'ny fahaizana.)
Amin'ity fizarana ity ao amin'ny lahatsoratra dia hitondra anao fomba maro aho hiatrehana ny fahavalonao sy ny fomba samy hafa hamoronana fihaonana, na tanjona lehibe izany na fihaonana kendrena tokana. Toy ny mahazatra dia manoro hevitra anao izahay amin'ny mpitari-dalana rehetra, safidio ireo tianao indrindra na manakaikeza ny mety vitanao raha tsy maharesy lahatra anao ny talenta iray.
Haavo 56: mpisotro ra
Haavo 57: Famotehana haingana
Haavo 58: Vato vato lehibe
Haavo 60: Sitrapon'i Necropolis
Haavo 75: Dingana spectral
Haavo 90: Worm
Haavo 100: Afofandiovana
Heartbreaker: Ny fitokonana any am-po dia miteraka 2. hery runika fanampiny isaky ny lasibatra lasibatra.
Mpisotro ra: Tatatra X p. fahasalamana kendrena mandritra ny 3 seg. Azonao atao ny mihetsika, mitsoaka, miala, ary mampiasa fahaiza-miaro rehefa mandefa io fahaizana io.
Rune Strike: Mamely ny lasibatra amin'ny (herin'ny fanafihana 60%). fahasimbana ara-batana. Nihena 1 segondra ny cooldown isaky ny rune lany rehetra. Miteraka 1 rune.
Heartbreaker Izy dia talenta mifantoka amin'ny fihaonana izay misy fahavalo maro be.
Mpisotro ra Ny talenta no hofidintsika tsy misy hatak'andro satria mifanaraka amin'ny toe-javatra rehetra. Amin'ny fasika dia vaky ihany.
Rune Strike Tsy talenta ratsy izany raha maniry fahasimbana fanampiny amin'ny kendrena isika ary raha azo antoka ny fahavelomantsika.
Lozam-pifamoivoizana haingana: Ny aretin-drao sy ny fahafatesanao ary ny fahasimbanao dia manimba 15% matetika kokoa.
Haemostasis: Ny vay dia mampitombo ny fahasimbana sy ny fanasitranana ataon'ny fahafatesan'ny fitokonanao ho faty amin'ny 20%. Miangona hatramin'ny in-5 izy.
fihinanana: Mameleza ny fahavalo rehetra eo alohanao amin'ny fanafihana noana, miatrika 87%. fahasimbana ara-batana ary manasitrana anao amin'ny 100% amin'izany fahavoazana izany.
Amin'ny maha talenta default anao dia hisafidy isika Lozam-pifamoivoizana haingana misaotra ny fitomboan'ny herin'ny runic power, ahafahantsika manimba sy miaina bebe kokoa.
Haemostasis Ity talenta ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny fivoriana izay misy tanjona kendrena betsaka. Amin'izany fomba izany dia tsy hanary rune tsy ilaina isika. Na izany aza, tsy safidy tsara izany.
fihinanana Izy dia talenta manana fahaiza-manao goavana amin'ny fihaonana miaraka amina tanjona marobe, ary koa ny ady sy ny ady kendrena… fantatrao.
Tendrombohitra tsy masina: Ny fihenan'ny Bone Shield tsirairay dia mampitombo ny fahasalamanao indrindra amin'ny 1%.
vata: Raha manana fiampangana 5 farafaharatsiny amin'ny Bone Shield ianao, dia ahena 5 ny vidin'ny Death Strike. ny hery runic. Ho fanampin'izany, ny Runic Power avoakanao dia nitombo 10.
Vato: Mandany hatramin'ny 5 ny fiampangana an'i Bone Shield. Ho an'ny karama tsirairay lany dia mahazo 6 ianao. ny herinaratra runic, mitelina fahasimbana mitovy amin'ny 6% amin'ny fahasalamanao ambony mihoatra ny 8 seg.
Tendrombohitra tsy masina y vata Tsy talenta mety amin'ny PvP ireo satria ny ampinga dia tsy maharitra maharitra hanararaotra ny tombotsoany.
Vato Safidy tsara izany raha toa ka alefantsika aorian'ity ampinga ity ny fahaiza-manao, ahazoana tombony lehibe indrindra.
Sitraky ny nekropolis: Ny fahasimbana nateraky ny fahasalamana ambany 35% dia nihena 35%.
Sakana fanoherana ny majika: Mampihena ny cooldown an'ny Anti-Magic Shell hatramin'ny 15 sec, ary mampitombo ny faharetany sy ny habetsany entiny 30%.
Fampidiran-dra: Mampihena ny simba rehetra alaina amin'ny 30% mandritra ny 4 seg.
Sitraky ny nekropolis Safidy tena ilaina io raha miatrika tanjona tsy manam-paharoa amin'ny arena na fomba hafa isika. Avo tokoa ny fahavelomana, raha ampiantsika amin'ny fanasitranana vita.
Sakana fanoherana ny majika Talenta mahasoa izaitsizy tokoa izany raha manao ozona ny fahavalontsika.
Fampidiran-dra talenta mahasoa tokoa izy io amin'ny fampihenana ny fahasimbana.
Claw ny maty: Ny fahafatesana sy ny lo dia mampihena ny hafainganam-pandehan'ny fahavalo any amin'ny faritra misy azy hatramin'ny 90%, mihena 10% isan-tsegondra.
Tanana tery: Mampihena ny cooldown an'ny Bloodthirsty Embrace amin'ny 30 seg.
Dingana spectral: Mankany amin'ny Shadowlands ianao, manala ny vokatra miorim-paka rehetra ary mampitombo ny hafainganam-pandehanao 70% mandritra ny 4 seg. Ny fanaovan-javatra rehetra dia manafoana ny vokany. Raha mavitrika dia tsy afaka milatsaka ambanin'ny 170% ny hafainganam-pandehanao.
Claw ny maty talenta tsara izany raha tiantsika ny tsy hitsoaka ny fahavalontsika.
Tanana tery mety ho lasa safidy tsara raha mampiasa tsy tapaka ny Mamihina ny sanguine amin'ny fivoriana.
Dingana spectral io no talenta tsy misy dikany hampitomboana ny fivezivezena.
maniry mafy foana: Ny Death Strike dia manome anao 15% averina amin'ny 6 sec.
Kankan-dra: Ny fanafihan'ny fiara anao dia manana fotoana hiantsoana aretina mpandatsa-dra. Ny kankana dia tsy manimba kely ny lasibatra mihoatra ny 15 seg. Avy eo dia vaky izy ireo ary manasitrana anao amin'ny 15% amin'ny fahasalamanao tsy hita. Raha latsaka ambanin'ny 50% ny fahasalamanao dia hipoaka avy hatrany ny aretin-dra anao ary hanasitrana anao.
Mariky ny rà: Mametraka marika mariky ny rà amin'ny fahavalo mandritra ny 15 seg. Ny fanafihana fiara mitondra fahavalo manimba dia hanasitrana ny niharan'izy ireo ihany koa amin'ny 2% amin'ny fahasalamana faratampony.
maniry mafy foana talenta mahasoa izany raha tsy mifantoka hatrany amin'ny fahavoazana isika.
Kankan-dra tena maloto io talenta io. Raha manana fahavalontsika eo afovoany isika ary afaka manafika azy ireo tsy an-kijanona, dia tsy hisy ny fandringanana antsika satria ny ambaratongantsika dia ho ambaratonga hafa. Na izany aza, mazàna dia tsy talenta naroso izany raha tsy lalao 1v1.
Mariky ny rà Tena talenta ilaina amin'ny arena izy io. Araka ny lazain'ny talenta, ny fanafihana fiara ataon'ny fahavalo dia hanasitrana ny tanjon'izy ireo, izay mety hahasoa tokoa raha ny fahavalo dia mpangalatra, feno habibiana na karazana hafa manafika haingana.
afofandiovana: Fifanarahana tsy masina izay manakana anao tsy hanana fahavoazana mahafaty. Fa kosa, ianao mandray ny fanasitranana rehetra voaray hatramin'ny fitoviana amin'ny fahavoazana sorohina. Maharitra 3 seg. Rehefa tapitra io vokany io, raha mitohy ny fandraisana ny fanasitranana dia ho faty ianao. Ity vokatra ity dia mety hitranga isaky ny 4 minitra fotsiny.
Mangetaheta mena: Mampihena ny cooldown an'ny Vampiric Blood amin'ny 1 segondra isaky ny 10. ny herinaratra runic lany.
Rivo-doza taolana: Rivotry ny taolana sy ny rà no mamely ny fahavalo eo akaiky eo, miatrika (herin'ny fanafihana 15.2334% p. Manimba ny aloka isaky ny 1 seg ary manasitrana anao amin'ny 3% amin'ny fahasalamanao fara-fahakeliny isaky ny miatrika fahasimbana. Maharitra 1 seg isaky ny 10. ny herinaratra runic lany.
Ho an'ity sampana talenta farany ity dia ny talenta aorinan'ny talenta natolotra anao no izy afofandiovana satria izany dia manome fahavelomantsika be rehefa ao amin'ny faran'ny fotoantsika farany isika.
Mangetaheta mena Talenta tsara izy io satria manome antsika fahombiazana betsaka kokoa noho ny roa hafa mandritra ny ady.
Rivo-doza taolana azo ampiasaina amin'ny fihaonana kendrena marobe ho toy ny fahasimban'ny bonus. Talenta miavaka raha mahita ny tenantsika eo afovoan'ny fahavalo maro isika.
Ny fihodinana ifotony an'ity fanaingoana ity amin'ny fihaonana tokana dia toy izao: Ra mangotraka (mampihatra Aretin-dra > Mpitifitra tsoka (rehefa very ny fiampangana rehetra momba ny Ampinga taolana)> fihinanana (isaky ny misy)>Fahafatesana sy lo > Mpitifitra tsoka (hitazonana ny fiampangana 5 an'ny Ampinga taolana)> Fahafatesana mahafaty (handany hery runic be loatra)
Fanafihana fototra (Areti-mena) hanome antsika, indraindray, famoahana maimaimpoana ny Fahafatesana sy lo.
Mpisotro ra (Talenta) dia mihetsika izay ahafahantsika manasitrana fahasalamana marobe amin'ny alàlan'ny mpilalao.
Fifofosan'ny fahafatesana dia mpamorona fandrahonana lavitra izay hampihatra Aretin-dra.
Herim-panahy voafatotra amin'ny ranomandry Izy io dia cd fiarovana iray izay hampihena ny fahavoazana voarain'ny 30%.
Fitaovam-piadiana Rune Weapon hita taratra amin'ny fanafihana an-tsary izany ary hanamafisana ny fiarovana antsika.
Ra vampirika mampitombo ny fahasalamanao indrindra amin'ny 30%.
Shell Shell Anti-Magic ity fahaiza-manao ity dia hahafahantsika mandray ny fahasimban'ny majika izay hatao mandritra ny 5 segondra.
Fangatahana saina Ny fahaizan'ny Knights Fahafatesana no ahafahan'izy ireo mampangina ny banga.
Filaharana maizina no mpamorona fandrahonana fototry ny Death Knight.
Fahasarotana mahafaty Ankoatry ny fisarihana ny tanjona dia hiteraka fandrahonana isan-jato izany.
Dingana spectral io no hany mpampianatra fakana fivezivezena antsika.
Fihinanan'i Sanguino Izy io dia ampiasaina hanintonana sy hametrahana amin'ny pixel iray ihany ireo orinasa rehetra manodidina ny tanjontsika.
Atsangano ny mpiara-dia Io no fahaizan'i Death Knight mamelombelona ny mpiara-dia aminy.
Asphyxiate tampoka kendrena kendrena tokana io.
fampifanarahana (Ady maharitra) / Medaly metaly gladiatera (Concrete dispeles)
Ra ho an'ny ra
Dance farany / Aura tsy misy pentina
Rojo fahafatesana / Filaharana maloto
Tantarao/Metera fanimbana Skada: Addon handrefesana dps, fanasitranana, fahasimbana voaray ...
Tsy maintsy maty ireo mpanasitrana: ity Addon ity dia hanisy marika ireo mpitsabo manamora ny fahafantarana azy ireo amin'ny ady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Death Knight Blood - PvP Guide - Patch 8.1.0
Death Knight Frost - Torolàlana PvP - Patch 8.1.0
Fanamboarana mivantana: 11 Jan